टाउको दुख्यो भनेर अस्पताल गएका ब्याक्तिको त्यो पार्ट हेर्दा डाक्टर चकित…… – List Khabar
Home / समाचार / टाउको दुख्यो भनेर अस्पताल गएका ब्याक्तिको त्यो पार्ट हेर्दा डाक्टर चकित……
टाउको दुख्यो भनेर अस्पताल गएका ब्याक्तिको त्यो पार्ट हेर्दा डाक्टर चकित……
admin February 3, 2022 समाचार Leaveacomment 115 Views
अ’त्यधिक टा’उको दु’खेर अस्पताल पुगेका चीनका एक पुरुषको खप्परभित्र एउटा गो’ली फे’ला परेको छ । सो गो’ली करिव २० वर्षअघि उनको ख’प्परभित्र प’सेको खु’लासा भएको छ । सेन्झेनका २८ वर्षीय सिआओ चेनलाई आफूले थाहा पाएदेखि नै बारम्बार टा’उको दु’ख्ने ग’र्दथ्यो । पछिल्लो समयमा उनलाई झनै ब’ढी टा’उको दु’ख्न था’लेको थियो ।
चेनले सुरुमा पर्याप्त नसुतेका कारण टा’उको दु’खेको हु’न सक्ने अनुमान गरे । तर, टा’उको दु’खाईको कारण उनी रातभर सुत्न सकेनन् । अन्त्यमा उनलाई अस्पताल नगई सुखै भएन । अस्पतालका चिकित्सकले उनको टा’उको दु’ख्नुको अनौठो कारण पत्ता लगाए ।
एमआरआई गरेपछि सेनझेन युनिभर्सिटी जनरल अस्पतालका चिकित्सकले चेनको खोपडीको वायाँ भागमा अनौठो बस्तु फेला पारे । नजिकबाट जाँच गर्दा सो बस्तु धातुको गो’ली भएको खुलासा भयो । सो गो’ली उनको ख’प्परभित्र कसरी प’स्यो भन्ने बारेमा अस्पतालका कर्मचारीले उनका अभिभावकलाई सोधेको थियो ।
करिब ८ वर्षको हुँदा उनी र उनका भाई घरमा ए’य’र ग’न खेलिरहेका थिए । गो’ ‘ली अ’कस्मा’त प’ड्कि’दा उनको टा’उको’को खो’प’डी’भित्र प’सेको थियो । टा’उको’मा गो’ली ला’गे’को थाहा पाएर बाबुआमाले गा’ ‘ली ग’र्ने ड’रले उनीहरुले कसैलाई भनेनन् ।
तसर्थ, उनीहरुले केही भनेनन् । कपालले टा’उकोको घा’उ ढा’क्दै गयो । अभिभावकले पनि केही थाहा पाएनन् । त्यतिबेला घाउ पनि खा’सै दुखेन् ।
गत महिना आ’कस्मि’क शल्यक्रिया गरेर उनको टा’उ’कोको गो’ली नि’का’लिएको थियो ।
Previous यूएईमा एक नेपाली युवतीसंग भारतीय युवाको बस्यो प्रेम, जे नहुनु थियो त्यही भयो !
Next कहिलेकाँही आँखा फरफराउने गर्छ ? हुनसक्छ शरीरमा यस्तो चिजको कमी